အလုပ်ရှာနေတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တောက်ပနေတဲ့ အနာဂတ်
သီရိဟန် ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခင်းအကျင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးနောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ပွင့်လန်းလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ လုပ်ငန်းတိုင်းဟာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လုပ်သားတွေ လိုအပ်မှုနှုန်း မြင့်မားလာနေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်း အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတွေအတွက်သာမက အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ပါ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးလာကြပြီလို့ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက.
ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲရန် သီးသန့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားမည်
ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို သီးခြား အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ သီးသန့်တာဝန်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က စီစဉ်နေသည်။
အခက်အခဲများစွာ ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တေးဂီတမြင်ကွင်းတွင် အပြောင်းအလဲများ ပေါ်ထွန်းလာနေသည်။ နာတလီ ဝေါင်း ရေးသားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့မှ တေးဂီတ ချစ်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ Indie ရော့ခ်တီးဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် Side Effect ကို ကြားဖူးကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ စင်မြင့်သို့ ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည့်.
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၆ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည့် Emirates သည် သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့တွင် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဒူဘိုင်းမှ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ အဖွင့်ပျံသန်းမှုနှင့် အတူ လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာတွင် လေယာဉ်ဆင်းသက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ “အခုဆိုရင် မြန်မာကို တော်တော်များများက ဝိုင်းကြည့်နေပါပြီ”ဟု Emirates.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ပိုက်ဆံမရှိဟု ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လုပ်စရာများ အများအပြားရှိသော်လည်း အစိုးရလက်ထဲတွင် ဘတ်ဂျက်လွန်စွာ နည်းပါးနေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
အခွန်ရငွေ လျော့နည်းနေမှုကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတိပေး
အစိုးရအဖွဲ့က တင်ပြသည့် အခွန်ရငွေစာရင်းတွင် လျာထားချက်ထက် လျော့နည်းမှုများအကြောင်း ဖော်ပြရာ၌ ယခုထက်ပိုမိုသော ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်သင့်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က သတိပေးလိုက်သည်။